Xawaalada Dahab-Shiil, oo la Sheegay in Qalab Milatari ay Gaadhsiisay Maamulka Somaliland – Rasaasa News
Barbara, January 17, 2012 [ras] – Wararka ka imanay magaalada dekada ah ee Barbara ayaa sheegaya in shirkada xawaalada Dahab-shiil, ay soo gaadhsiisay maamulka Siiraanyo qalab milatari.
Qalabkan milatariga ayaa ka soo degay dekada Barbar 10/01/2012, kaas oo ah tiradiisu tahay 12 gadiid ah, qalabkan ayaa isugu jiro gaadiidka qaada ciidamada, gaadiidka xambaara hubka culus iyo taangiyo.
Warkan ayaa laga soo xigtay xubno ka tirsan ururka SNM, oo uu fadhigoodu yahay magaalada Babar. Kol wax laga waydiiyey Maareeyaha dekada Barbar, wuxuu sheegay in uusan waxba kala socon, laakiin loo sheegay in qalab milatari oo ay Ethiopia leedahay dekada laga saaray.
Waa markii ugu horaysay oo shirkad ka mid ah shirkadaha xawaaladaha dalka Somaliya, la sheego in ay faraha la gasho colaada ka jirta dalka Somaliya, keentana dalka qalab milatari.
Dalka Somaliya, waxaa saaran xanibaad qalab ciidanka ah, in kasta oo ay hub la soo galaan dalalka Afrika ee nabad ilaalinta u jooga Somaliya.
Dhawaan ayey ahayd, kolkii dalka Maraykanku uu joojiyey xawaaladaha ka shaqeeya dalka Maraykanka, isaga oo sheegay in aan la ogaan karin arimaha ay ku jiraan xawaaladuhu.
Maraykanka ayaa hor u joojiyey shirkada xawaalada ee AL Barakaad, kolkii laggaga shakiyey in ay xidhiidh la leedahay arggagixisada, inkasta oo dhawaan la fasaxay kolkii waxba lagu waayey.
Waxaa walaac badan laga muujinayaa arimaha la sheegay in ay shirkada Xawaalada ee Dahab-shiil, lugta kula jirto. Shirkada Dahab-shiil, ayaa si xoog leh uga hawlgasha dalalka Bariga Afrika, sumcad wayna ku leh.
Hadii ay arimahan ay wargaysadu qorayaan run noqdaan, waxaa suurto gal ah in shirkadu si sahal ah u musalafto sumcad xumada ka soo gaadha arimahan.
Dabley Dalxiisayaal ku Dishay Dalka Ethiopia